Ikhasi 1 kwezingama-3 Imiphumela 1 - 15 kwezingu-37
I-Boeing F / A-18c I-Hornet Iningi le-livery FSX & P3D HOT
Nayi i-Boeing F / A-18c Hornet ye Prepar3D kufika ku-v4 futhi FSX, lokhu add-on obekumele umsebenzi omkhulu kusuka kubabhali kunikezwa kuFreeware (ikhwalithi yi-Payware). Ifayela lisindayo: 548 MB, lokhu kujwayelekile ngoba iphakethe lifakwe nama-85iesies wezinga eliphezulu kakhulu, imisindo eyiqiniso, ... Funda kabanzi
Usayizi 548 MB
Play 26 698
I-Mitsubishi F-2 ku-version A ne-B ene-cockpit yangempela, iphethe iphakethe elenziwe iqembu elidumile laseJapan FS KBT. Kuqukethe ukuhluka kwe-30, i-parachute, izikhali nokubukwa okuningi kwekhamera nemifanekiso.I-Mitsubishi F-2 iyinhlangano ye-fighter ehlukahlukene ephuma ku-General Dynamics F-16 elwa ne-Falcon, futhi ... Funda kabanzi
Ithimba le-FS KBT, u-Hiroaki Kubota
Play 9 975
I-Alphasim's MiG-23 FLOGGER, ivuselelwa ku- FSX/P3D amalambu endabuko we-MDL X, izithombe kanye nezinto zokwakha. Izitolo zangaphandle ngezimo zokubonakala kwesisindo, ngaphandle kwesiteleka esilayishiwe: Droptank on isimo sesisindo ngokusebenzisa imenenja elayisha, RN28 izitolo zenuzi ezimweni zokwehla zezindiza ezivela endizeni eyilondoloziwe.AS6 KAREN ... Funda kabanzi
Isibonelo ngu-Alphasim, FSX ukuguqulwa kwe-LLS
Play 9 371
ENyakatho Melika RA-5C Vigilante FSX & P3D
Qedela add-on waseNyakatho Melika RA-5C Vigilante, owayekade eyi-Payware FS2004 wase-Alphasim owaba yiFreeware neVirtavia wabe eseguqukela FSX / P3D ngama-LLS ngokufakwa kwe-F-1 cockpit ebonakalayo evela kuTim 'piglet' Conrad. Yebo, kuyinkimbinkimbi, kepha esikukhathalelayo yikho ... Funda kabanzi
Alphasim (Virtavia) ukubuyekezwa ngu LLS
Usayizi 41.2 MB
Play 8 070
U-Iris Phantom AS-GA Megapack FSX & P3D HOT
Okuhle kakhulu addon I-Freeware mega pack ye-F-4K / FG.1 Phantom Air Ground Attack Superiorty enobuhlakani obuningi. Le phakethe ifaka phakathi izilinganiso eziyi-13 ezinamamodeli amabili. Yonke imiphumela kanye nokulungiswa kwentuthu kufakiwe. Kuhlolwe nge FSX / Ukusheshisa futhi Prepar3D. kufaka phakathi i-FDE, imisindo yangokwezifiso, amasheji, i ... Funda kabanzi
Lockheed Martin Prepar3D kufika ku-v3
Model ngu IRIS Flight Simulation Software, iphakethe by David Robles, VC ngo-Tim Conrad
Add-on Version+ kwamaphutha
Usayizi 76.6 MB
Play 15 124
Iphakheji ye-L-39 ye-Albatros Yezempi FSX & P3D HOT
I Aero L-39 Albatros kuyinto ephezulu ukusebenza jet Umqeqeshi izindiza athuthukile eCzechoslovakia ukuhlangabezana nezidingo "C-39" (C cvičný - Umqeqeshi) ngesikhathi 1960s ukuba esikhundleni L-29 Delfin. Kwakuwusuku lokuqala lesibili isizukulwane jet abaqeqeshi, futhi owokuqala turbofan-sikagesi Umqeqeshi prod ... Funda kabanzi
Usayizi 14 MB
Play 26 883
U-Iris Tornado F-3 FSX & P3D HOT
Uhlobo olulungisiwe lweTornado F.3 kusuka ku-IRIS Simulation, imisindo emisha, ukulungiswa kwe-VC nokunye okuningi kwenziwe ngcono (bona i-Readme). Ukungeza imiphumela ye-afterburner, i-adaptation ye Prepar3D v2 +. Sebenzisa izinkinobho zezithonga ukusabalalisa / ukukhipha izimpiko zejometri eziguquguqukayo. Kunikezwe ngobuningi bokubuyisa ... Funda kabanzi
Usayizi 41.9 MB
Play 23 853
Ufune i-CrusaderF8 v1.00 FSX & P3D HOT
Okuphelele kakhulu futhi kunemininingwane add-on yenziwe nguRoland Laborie (ongumFulentshi). Ekuqaleni bekungokwe-FS2004 kepha sibonga umngani wethu uDanny Garnier manje kuyahambelana (port-over) no FSX or Prepar3D. Kubandakanya i-cockpit ebonakalayo (i-VC), ukubuyisa okuyishumi nambili kanye nezinhlobo ezahlukahlukene, imisindo yangokwezifiso, i-animatio Funda kabanzi
ILabieie Roland, iLiaurent correia, uJean Pierre Langer, uJean Pierre Bourgeois, FSX ukubuyekeza nguDanny Garnier
Usayizi 24.9 MB
Play 10 400
I-Dassault Mirage F1 Mega Pack FSX & P3D HOT
Dassault Mirage F1 Megapack. Lena iphakethe egcwele besebenzisa emangalisayo Mirage F1 ngu Kirk Olsson ne-VC zibuyekezwe Danny Garnier. Kufaka onobuhle eziningi futhi liveries. Liveries zihlanganisa airforces European, SAAF, Ugwadule, Spain, Iraq, Jordan, Iranian, Qatar, Morocco, e ukuhluka eziningi .... Funda kabanzi
Model: Kirk Olsson, iphakethe Mega: Alex Guerreiro, VC buyekeza: Danny Garnier
Usayizi 153 MB
Play 42 095
I-Iris Mig 29 Mega pack enamamodeli amaningi, ukwakheka nemiphumela. Uhlu lokubuyiselwa: iRussia, iMalaysia, Czech Republic, i-Iran, i-Iraq, i-India, ne-Cuba, i-East Germany, i-Luftwaffe, iSoviet, i-Romania, i-Hungary, i-Bangladesh, ne-Algeria. Iphakheji ifaka ne-VC yekhwalithi ephezulu enezinhlaka ezilungisiwe ze FSX/P3D. Cindezela ... Funda kabanzi
IRIS Flight Simulation Software - Repack Alex Guerreiro
Usayizi 54.5 MB
Play 41 061
ISececat Jaguar FSX & P3D HOT
Le Jaguar enhle ekuqaleni yenzelwe i-FS2004 yabe iguqulwa yasebenza ngaphansi FSX & P3D kwakungu-payware, kodwa waba mahhala (i-freeware) ukuze bonke bakujabulele. Qedela add-on nge-gauge yangokwezifiso, i-VC, iphaneli ye-2d, imisindo, uhlu lokuhlola nokuhlola, izithombe, imiphumela ekhethekile.The SEPECAT Jaguar yindiza yezempi F ... Funda kabanzi
Usayizi 23.7 MB
Play 17 569
Le phakheji bekungu-Saab Viggen J37 we-payware owayesebenza njenge-freeware. Kwenziwe ushintsho endizeni.cfg nephaneli 2D / VC ukuze ihambisane nayo FSX/P3D. Amamodeli ambalwa afakiwe ahlomile futhi engenazo izibhamu.I-Saab 37 Viggen (Thunder) indiza enhlobonhlobo eyenziwe ... Funda kabanzi
IVirtavia / Alphasim FSX P3D izibuyekezo nguHenk Schuitemaker
Usayizi 67 MB
Play 19 237
I-F-8 iVought Crusader FSX & P3D HOT
Le phakheji kwakuyi-cr payader Crusader Alphasim / Virtavia eseyatholakala njengamahhala. Izinguquko zenziwe endizeni.cfg nephaneli 2D / VC ukuze ihambisane nayo FSX/P3D. Abaphindwayo / amamodeli: I-US Navy F-8C + F-8J / Aeronavale F-8E (FN) / USMC F-8K.I-F-8 Crusader (ekuqaleni i-8U) iyisikhulu ... Funda kabanzi
Okwangempela nguVirtavia. Kuguqulwe ku FSX kwendabuko ngezibuyekezo zephaneli nguHenk Schuitemaker. Buyisa ngoDanny Garnier
Usayizi 25.7 MB
Play 19 970
Iphakheji ye-UKMIL Harrier FSX & P3D HOT
Nayi i-Harrier GR5 / 7 ne-T10 ye FSX or P3D. Ukufika nokubuya mpo. Kubandakanya ukwakheka kanye namamodeli ambalwa, kufaka phakathi imisindo yangokwezifiso ne-VC enemininingwane. Kubandakanya imodeli enemininingwane ye-3D.Lokhu add-on kumahhala, kepha kusungulwe ukusekela USIZO LWEHEROES (H4H) inhlangano yomusa waseBrithani eyethulwe o .. Funda kabanzi
Usayizi 42.2 MB
Play 33 908
Ukuze FS2004 version ehambisanayo uchofoze hereIncludes 6 amamodeli 11 ukwakheka. Kufaka abanikeze asebenza nabo yesimanje virtual 2D panel. Kuhlanganisa ngokwezifiso umsindo, Effective sikaphalafini umphumela, animations eziningi. Ungakhohlwa ukufunda Handbook.pdf.The Lockheed Martin F-35 Lightning II emndenini ... Funda kabanzi
IRIS UKUBALEKELA sekulingisa SOFTWARE
Usayizi 31.6 MB
Play 33 268